गायन क्षेत्रमा चम्किदै अनुमा – Saurahaonline.com
गायन क्षेत्रमा चम्किदै अनुमा
प्रस्तुती आशिष अधिकारी
चितवन, २८ पुस । “माईतीघर तिम्रो हैन पराईघर जाउ” बोलको म्युजिक भिडियोबाट निकै चर्चामा आएकी गायिका हुन अनुमा कोईराला ।
हुन त उनका दर्जनौ म्युजिक भिडियोहरु पनि बजारमा चर्चामा नआएका भने होईनन् तर पछिल्लो समयमा आएर चर्चाको शिखरमा पु¥यायो अनुमालाई यो म्युजिक भिडियोले । संगितकार शञ्जु श्रेष्ठले संगित भरेको “अन्माई दियौ कर्मको घरमा” बोलको म्युजिक भिडियोले पनि कम चर्चा बटुलेन । संगितको क्षेत्रमा आफ्नो छुटै पहिचान बनाएका संगितकार श्रेष्ठले संगित भर्ने गरेका छन अनुमाले अभिनय गर्ने अधिकाशं म्युजिक भिडियोहरुमा । ललितपुर हात्तिबनमा स्थाई घर भएकी अनुमाको शारीरिक उचाई पाँच फिट दुई ईन्च छ । २०६५ सालबाट निरन्तर गायन क्षेत्रमा लाग्दै आएकी अनुमाको रुचि भने यस क्षेत्रमा लाग्ने थिएन तर पछि समय सगँसगै मोडलिङ्ग र गायन क्षेत्रमा पनि स्थापित गरायो समयले उनलाई । पछिल्लो समय २४ घण्टामा १८ घण्टा भन्दा बढि समय खर्चिन्छन यस क्षेत्रमा अनुमाले । गायन र मोडलिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी लिईएकी छिन त अनुमाले । यसै बिषयमा नमस्ते बिहानी पत्रिकाले अनुमा सगँ गरेको कुराकानी ।
कस्तो छ गायन तथा मोडलिग क्षेत्र ?
अहिलेको अवस्थामा गायन तथा मोडलिङ्ग क्षेत्र ठिकै छ, भन्ुनपर्छ । संगित मेरो आफ्नो क्षेत्र र साथी जस्तै भएको छ, त्यसले गर्दा पनि संगितलाई आफुलाई भन्दा धेरै माया गर्दछु । आफु भन्दा अग्रज सगँसगै एकसाथ मिलेर काम गर्न पाउदा थप हौसला प्रदान भएको छ । यो क्षेत्रमा पैसा पनि छ, र इज्जत पनि छ । एक हिसाबले भन्नुपर्दा दुवै हातमा लड्डु छ ।
म्यूजिक भिडियो बनाउन गाह्रो छ भन्छन् नि ?
काममा सजिलो र असजिलो दुवै हुने गर्दछ । मिहिनेतका साथ काम गर्नेलाई गाह्रो छैन् । मात्र आफु भित्र भएको प्रतिभालाई संगितमा मिलाएर प्रस्तुत गर्ने हो । संगित विना जो कोही पनि एक्लो रहनसक्दैन् । त्यसैले गाह्रो छैन् । मिहिनेत र लगनका साथ काम गरे सधै सजिलो हुन्छ नि, कि कसो त !
मोडल तथा गायिकाकाहरु घमण्डी हुन्छन् रे नि ?
त्यस्तो लाग्दैन् मलाई । अरु गायक गायिकाकाहरु कस्तो स्वभावको हुनुहुन्छ त्यो उहांहरु कै कुरा हो । अब मेरो कुरा गर्ने हो भने म त घमण्डी छु जस्तो लाग्दैन् । हेराई र बुझाई फरक पर्ने हो ।
यस क्षेत्रमा लागेपछि के पाए, के गुमाए जस्तो लाग्छ त ?
धेरै पाएको छु । गुमाएको छैन । गुमाएको भए तपाईहरु जस्तो सञ्चारकर्मी र दर्शक श्रोताको साथ काहां पाउथे र ! मेरो गायन क्षेत्रको डायरीमा दर्शक श्रोताको साथ पाएको मात्रै रेकर्ड छ ।
गायन र मोडलिङ्गसगसगै लैजान अप्ठारो भएको छैन् ?
विल्कुल छैन, आशिष जी । यि दुवै एकअर्कोका परिपुरक छन् । गाउदा पनि र भिडियोहरुमा अभिनय गर्दा पनि सबै काम सगँसगै गर्ने गरेको छु ।
यो क्षेत्रबाहेक अरु क्षेत्र तपाईले देख्नुभएन् ?
मैले यो क्षेत्र चाहि रोजेको होईन् । बाल्यकाल देखिको झुकाबले गर्दा र समयको मागले नै मलाई यो क्षेत्रमा भिसा लागेको हो भन्नुपर्छ ।
रमाईलो प्रशंग, यति राम्री हुनुहुन्छ, बिहेबारी पनि भईसक्यो अफर कक्तिको आउछ ?
हसाउनु भयो । राम्री त छैन म । बिबाहित महिला र बच्चाकि आमा भएकीले गर्दा खासै अफरहरु आएका छैनन् र आईहाले भने पनि धन्यबाद र नमस्कार भनिदिन्छु ।
रमाईलोमा रमाईलो,यदि तपाईलाई कसैले पूरुष बनाईदिन्छु भन्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ ?
हा हा हा, उसैलाई सोध्छु म, कि मलाई या महिलालाई पूरुष बनाउन कसरी संम्भब छ भनेर । हैन, कसैले पूरुष बनाईदिन्छु भने पनि ठिक्कै छ तर एउटा महिला भएकाले गर्दा पूरुषले गर्ने काम मैले गर्न सक्दिन नी